Thet Htoo's: Do you use Google ?
Do you use Google ?
အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကို ရောက်ရင် မေးလေ့ မေးထ ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက Do you speak English ? တဲ့။ သူတို့ မေးချင်တာတစ်ခုခု ပြောချင်တာတစ်ခုခုကို မေးဖို့ ပြောဖို့အတွက် အရင်ဆုံး အင်္ဂလိပ်စကား ပြောပါသလားလို့ ကြိုမေးတာပေါ့။ Can you speak English ? လို့ ပြောဘူးနော်။ ဒီပို့စ်လေး ရေးဖို့ စဉ်းစားရင်း အချို့တွေကတော့ မင်း ဟိုဟာ လုပ်နိုင်သလား၊ ဒီဟာ လုပ်တတ်သလားလို့ မေးလေ့မေးထရှိတယ်ဆိုတာ ဆိုင်သလား မဆိုင်သလားမသိ လျှောက်ပြီး တွေးမိသေးတယ်။
အခု ကျွန်တော်လည်း မေးခွန်းလေး တစ်ခုလောက် မေးချင်လို့ပါ။ Do you use Google ? လို့ အချို့ အချို့သော အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို မေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီ အချို့ အချို့ဆိုတဲ့ သူတွေဆိုတာ သိပ်မနည်းဘူးနော်။ တော်တော်များများ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် www.mylot.com ဆိုတဲ့ Social Community တစ်ခုမှာ တော်တော်လေး အသည်းအသန် ဝင်ရေးနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့။ ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ တော့ပစ်တစ်ခုကို ဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် မသိတာလေး တစ်ခု ပြန်မေးဖူးတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ နာမည်တစ်ခုပါ။ မှတ်မှတ်ရရ George Orwell ရဲ့ Animal Farm ဆိုတဲ့ စာအုပ်အကြောင်းပါ။ အဲဒီစာအုပ်အကြောင်းကို ကျွန်တော်က ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသူတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်မိပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူက ပြောပါတယ်။ မင်း Google သုံးသလားတဲ့။ ရှက်လိုက်တာဗျာ။ ပြန်တွေးတိုင်း ရှက်မိပါတယ်။ တကယ်ပါ။ (ကျွန်တော်တို့က) လို့ ကျွန်တော် မပြောသေးဘူး။ ကျွန်တော်ကလို့ပဲ ပြောမယ်။ သူများ ခွံ့ကျွေးမှ စားတတ်တာ အကျင့်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ နည်းနည်းလေး (နည်းနည်းလေးပါ) ရှာဖွေ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့ကို မေ့နေတတ်တယ်။
ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်စလုပ်တော့ ဖိုရမ်ထဲမှာလဲ မေး၊ ဂျီတော့ခ်မှာလည်း မေး၊ ကြုံတဲ့သူကိုမေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ မေးရတာများတော့ အားနာတာကတစ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာရှာလို့ရပါလားဆိုတာ နည်းနည်းလေး သိလာတာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ကိုယ် မသိတာလေးတွေကို Google ကိုပဲ သုံးပြီး ရှာကြည့်ပါတယ်။ တွေ့တာပါပဲ။
Google မှာ ရှာပါ။ မြန်မာလိုလည်း ရိုက်ပြီး ရှာလို့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုလည်း ရှာလို့ရပါတယ်။ မြန်မာလိုနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ရောပြီး ရှာလို့လည်း ရပါတယ်။ Google Search Operator တွေအကြောင်းကိုလည်း လေ့လာကြည့်ပါ။ အများကြီး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တာတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာလို့ တွေ့ရင် သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ Wikipedia မှာ List of Google Products ဆိုတာလေးကိုလည်း ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Google မှာ ကျွန်တော်တို့ မသုံးပဲ ထားတဲ့ Service တွေ အများကြီး ရှိသေးတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပေးတဲ့သူက အလကားပေးတာကို ယူတဲ့သူက နည်းနည်းလေး အားစိုက်လိုက်ရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိဖို့ချည်းပါပဲ။
ဒီပို့စ်ကို ဘယ်လို ရေးဖို့ဖြစ်လာသလဲဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို အသိတစ်ယောက်က မေးပါတယ်။ Keyboard က ကီးလေးတစ်ခုကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲလို့ မေးလာရာကနေ ဒီပို့စ် ရေးဖို့ ဖြစ်လာတာပါ။ မြန်မာစာ Keyboard Map ဆိုလည်း အလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်။ သူမေးတာက အင်္ဂလိပ် Keyboard က ကီးလေးတစ်ခုကို မေးတာပါ။ Tilde(~) ဆိုတဲ့ ကီးလေးကို ဘယ်လို ခေါ်သလဲ သိချင်လို့ပါတဲ့။ စိတ်လေသွားတယ်ဗျာ။ အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ ရှာလို့ လွယ်တာလေးတွေကို လာလာမေးတာများတာနဲ့ ဒီပို့စ်ရေးဖြစ်တာပါ။ ဘာလို့များ Google ကိုဖွင့်ပြီး ရှာလိုက်ဖို့ မစဉ်းစားသလဲ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ မေ့နေတာဆိုရင်တော့ Google ကို မသုံးတာကြာလို့မေ့နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်နော်။ မယုံမရှိနဲ့။ Google မှာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးဖြစ်နေတာ Gmail, Gtalk, Blogger လောက်ပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ကို သုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ User တော်တော်များများကတော့ Google ဆိုတာ Search Engine တစ်ခုပါဆိုတာ မေ့နေကြပါတယ်။
အောက်မှာ Wikipedia ရဲ့ List of Google Products ကို Copy/Paste လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဘယ် Product တွေကို နေ့တိုင်းသုံးဖြစ်တယ်၊ ဘယ် Product တွေကို ရံဖန်ရံခါ သုံးဖြစ်တယ်၊ ဘယ် Product တွေကို လုံးဝ မသုံးဖြစ်ဘူး ဆိုတာ နည်းနည်းလောက်ကြည့်သွားပါလား။ ကျွန်တော့်ကို မေးရင်တော့ အခုချိန်ထိ ရှာဖွေစူးစမ်းဆဲပါ။ ကျွန်တော်လည်း အားလုံးကို သေချာ မသိသေးပါဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေကြပါစေ...။
Chrome (Windows XP/Vista)
Earth (Linux, Mac OS X and Windows 2000/XP/Vista)
3D animated Chat program. This service will be closed on December 31st 2008.
Collection of computer applications -- some Google-created, some not -- including Google Earth, Google Desktop, Picasa, Google Talk, StarOffice and Mozilla Firefox.
Picasa (Linux and Windows 2000/XP/Vista)
An application to help uploading images to the "Picasa Web Albums" service It consists of both an iPhoto plug-in andastand-alone application.
SketchUp [(Mac OS X and Windows 2000/Windows XP)
Pinyin IME (Internet Explorer extension) (Google China)
Send to Phone (Firefox)
A downloadable application that has many advantages over accessing Gmail throughaweb interface onamobile such as the ability to interact with Gmail features including labels and archiving. Requiresaproperly configured Java Virtual Machine, which is not available by default on some platforms (such as Palm's Treo).
Mobile application for viewing maps onamobile device, available for BlackBerry, Windows Mobile, Symbian, J2ME and Palm OS smartphones or any phone withaproperly configured Java Virtual Machine.
Calling system so users can call advertisers for free at Google's expense from search results pages.
Social networking site built specifically for use on mobile phones. Users text their location to the service, which then notifies them of crushes, friends, friends' friends and interesting venues nearby.
Communicate and interact inavirtual world, this new beta was launched on July 9, 2008.
Webpage-publishing program, which can be used to create pages and to host them on Google's servers.
A site containing links toalarge archive of Chinese pop music (principally Cantopop and Mandopop), including audio streaming over Google's own player, legal lyric downloads, and in most cases legal MP3 downloads. The archive is provided by Top100.cn (i.e. this service does not search the whole Internet) and is only available in mainland China. It is intended to rival the similar, but illegal, service provided by Baidu.
Video search engine and online store for clips internally submitted by companies and the general public. Google's main video partnerships include agreements with CBS, NHL and the NBA. Also searches videos posted on YouTube.
Bar on your desktop withaminibrowser built into it. It was discontinued whenavery similar feature was added to Google desktop. Some people preferred Google deskbar for its ability to add custom searching and the mini-browser so you wouldn't have to open an actual window. The last release, version 9.95, hada.NET plugin.
ရေးသူ = မျက်လုံး | ရေးသားချိန် = 6:08:00 AM
| ကဏ္ဍ = Google
Hardware Information Analysis Tools
My Web and My Style 2008
Morph your Face Online